Inona no tena miavaka amin’ilay hira mandatsa-dranomaso ‘Pir’ izay niteraka adihevitra nasionaly tany Nepal? · Global Voices teny Malagasy
"Te-hampiseho ny fitomboan'ny elanelana eo amin'ny fiainan'ny mpiara-miasa aho"
Voadika ny 18 Mey 2022 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny українська, Español, English
Pikantsary avy amin'ny The Song Pir ao amin'ny YouTube (fampiasana ara-dalàna). Nasiam-panovana ny hira ary nampidirina indray taorian'ny fanakianana.
Tsy hira mahazatra izany. Maharitra enina ambin'ny folo minitra, ny hira ‘Pir’ nosoratana sy notontosain'ilay mpihira Prakash Saput mampiseho kokoa ny manjò ireo mpiasa ambony Maoist izay nanohana sy niady nandritra ny fikomiana naharitra 10 taona tany Nepal. Tsy ny hira ihany no mahatonga anao miray hina amin'ireo mpilalao fa mampitomany anao koa izany eny amin'ny toerana (maro).
Nahatratra 10 tapitrisa ireo mpijery ny hira tamin'ny herinandro taorian'ny nampidiran'i Prakash azy tao amin'ny YouTube tamin'ny 11 martsa 2022, saingy tsy maintsy nasiam-panovana sy nampidirina indray izy taorian'ny adihevitra mamaivay. Nivoaka voalohany tao amin'ny YouTube tamin'ny 19 martsa 2022, efa nahangona mpijery manodidina ny 5,6 tapitrisa izany tamin'ny fotoana nanoratana.
Mampiseho ny fomba nanaovan'ireo mpiasa ambony Maoista sasany hahatonga azy eo amin'ny fahefana sy tonga tamin'ny governemanta ny “pir” raha tsy maintsy nanao asa ambany ary nandao ny firenena mihitsy mba hiasa ho toy ny mpiasa mpifindra monina kosa ny hafa.
Avy amin'ny fikomiana mankany amin'ny governemanta
Nanomboka tamin'ny taona 1996 ny fikomiana Maoista nanana tanjona hanafoana ny fanjakan'andriana sy hanorina repoblika entim-bahoaka iray any Nepal. Nahatonga fahafatesana maherin'ny 13.000 sy 1.300 tsy hita popoka teo anelanelan'ny taona 1996 sy 2006 ny ady, hoy ny Informal Sector Service Centre (INSEC), fikambanana Nepaley momba ny zon'olombelona. Nifarana ny ady raha nanasonia ny Fifanarahana Fandriampahalemana feno ireo Maoista tamin'ny 21 Novambra 2006. Tamin'ny taona 2008, voafidy ho praministra i Pushpa Kamal Dahal, “Prachanda,” “filohan'ny Antoko Komonista ao Nepal (Maoista). Lasa praiminisitra ny mpitarika Maoista iray hafa, Baburam Bhattarai tamin'ny taona 2011, ary niverina ho praiminisitra i Prachanda tamin'ny taona 2016.
Pikantsary avy amin'ilay hira ‘Pir‘ tao amin'ny YouTube. Fampiasana ara-drariny.Screenshot from the song ‘Pir‘ on YouTube. Fair use.
Voampanga ho nanimba ny adin'ny vahoaka
Ao amin'ilay hira (amin'ny teny Nepaley), afaka mahita sy mahatsapa ny fahorian'ireo mpivady mpiady Maoista taloha ny mpijery. Nahazo vola kely tamin’ny fivarotana hena ilay rangahy ary tsy afaka nandoa hofan-trano akory. Noho izany, nandeha niasa tany ivelany ny vadiny ka namela ny zanany vavy niaraka tamin'ny rainy. Nogadraina anefa izy izy ary miantso vonjy. Nanatona minisitra iray niara-niady taminy tamin’ny ady an-trano ilay rangahy. Saingy tsy nanaiky hahafantatra azy ilay minisitra ary nanary ny fangatahany.
Raha tia ilay hira ny ankamaroan'ny mpijery Nepaley, dia niampanga an'i Saput ho nanimba ny adin'ny vahoaka kosa ireo Maoista ary nampitandrina azy ny sasany tamin'izy ireo fa hisy voka-dratsiny raha tsy nesoriny izany.
Mpisera Twitter Nepaley Prakriti Khadka nilaza hoe:
Tena safidy tsara ireo teny, tononkira, mpilalao, ny andian-tantara. Zava-kanto lehibe, sarimihetsika ambava homana ampo mieritra ny #Pir avy amin'i #PrakashSaput.Tena be herim-po sy manaiky ary mitantara ny zava-misy ankehitriny sy ny vokatra henjana ateraky ny ady an-trano tena zava-poana izay tsy maintsy nolalovantsika vahoakan'i Nepal!
Ny praiminisitra ao Nepal teo aloha sady mpitarika ny ady an-trano teo aloha, Baburam Bhattarai nisioka hoe:
Milaza ny filôzôfian'ny Marxista hoe ‘mitadiava ny fahamarinana avy amin'ny zava-misy’. Nandritra ny fikarohana, azoko mivantana fa voatery mivarotra ny vatany ny vehivavy ho fikarakarana ny zanany sy ny vadiny. Izay niady ho an'ny fanafahana ny vahoaka omaly dia mivarotra ny vatany mba hahazoana mofo sy dibera! Andao hanaiky ny fahamarinana mangidy; mitady vahaolana; tsy manozona @PrakashSaput!
Nampiseho ilay lehilahy ny seho teo aloha, rehefa nandao azy vadiny mba hiasa any ivelany ary nihaona tamin'ny vehivavy mpiady iray izay niara-niady ny ady taminy nanao asan'ny mpivaro-tena.
Mpanao gazety Sudarshan Khatiwada nisioka hoe:
Lehilahy iray (Marxista mahatsiaro tena) maika hanao firaisana amin’ny vehivavy hafa, volana vitsivitsy monja taorian’ny nandehanan’ny vadiny ho any amin'ny firenena vahiny. Tsy misy manontany an'izany. Betsaka ny fanontaniana momba ny fanerena ny mpiady hivaro-tena ho an'ny fanabeazana sy fitaizana ny zanany. Mety noho ny fanjakazakan-dehilahy izany.
Voafafa tamin'ny seho ankehitriny ity sehatra ity izay mampiseho ny fihaonan'ny protagonista mpiara-dia teo aloha voatery nivaro-tena, ka nitarika adihevitra nasionaly matotra. Raha niresaka tamin'ny Sampam-baovao Nasionaly, Nepal (RSS), nilaza i Prakash Saput fa nanaloka ny lafiny tsara hafa tamin'ilay hira ny zava-miseho.
Nilaza i Prakash fa namorona mpilalao ho an'ilay hira avy amin'ny fifandraisany tamin'ireo mpiady Maoista taloha izy. Talohan'ny nanoratana sy nampidirana indray ilay hira, nanoratra tao amin'ny Facebook izy hoe:
…Te-hilaza fotsiny amin'ny alalan'ny ‘Pir’ aho fa, na dia niova aza ny fitondrana noho ny ady an-trano, dia tsy niova ny toe-draharaha. Te haneho ny fitomboan'ny elanelana eo amin'ny fiainan'ireo mpiara-dia niara-niady ho amin'ny fitoviana aho…
Na izany aza, tsy ny ‘Pir’ no lahatsary voalohany tao Nepal izay tsy maintsy nasiam-panitsiana sy nampidirina indray. Tamin'ny volana Febroary 2019, tsy maintsy nesorina tao amin'ny YouTube ilay hira ‘Lutna sake lut, Nepal mai ho chhut,’ izay adika hoe ‘Mandrobà raha azonao atao; eto Nepal ihany no azo anaovana izany” na dia teo aza ny lazany taorian'ny nahazoan'ilay mpihira Pashupati Sharma fandrahonana avy amin'ny Antoko Komonista ao Nepal (Marxist-Leninist United). Namely ny kolikoly teto amin’ny firenena ilay hira. Samy voampanga ho nisy ambadika politika sy mikendry mpitarika ara-politika sasany ireo mpihira ireo.
Noho ny faharavan'ny fahalalahana maneho hevitra, dia tsy azo inoana fa hamorona hira mampibaribary ny asa ratsy ara-politika sy ara-tsosialy izy ireo amin'ny ho avy. Mieritreritra indroa alohan'ny hamoronana hira toy izany ihany koa ireo mpihira sy mpanakanto hafa.